बाजुरा कारागारमा बन्दीहरुले जनयुद्द दिबश मनाए ! « Pokhara Pati
बाजुरा कारागारमा बन्दीहरुले जनयुद्द दिबश मनाए !
प्रकाशित मिति : २०७६ फाल्गुन १, बिहीबार
नेत्र बिक्रम चन्द ‘विप्लब’ नेतृत्वका बन्दी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले बाजुरा कारागार भित्रै २५औं जनयुद्द दिबश मनाएका छन् । प्रमुख अतिथि रहेका आदर्श लगायत अन्य अतिथिहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा चियापान कार्यक्रमका साथै भलिबल प्रतियोगिता पनि भएको थियो ।
हिरासतमा रहदा भेटघाट तथा सुचना संचारमा प्रतिबन्ध लगाएर गिरफ्तार बन्दिहरुलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको संचालक डम्बर सुनारले बताए । महिला प्रहरी हुँदाहुँदै पुरुष प्रहरीले महिला बन्दिहरुलाई कुट्पिट गरेको र अन्य सबै बन्दिहरुलाई झुन्ड्याएर, करेन्ट लगाएर कुट्पिट गर्दै मानसिक यातना समेत दिएको उनले खुलासा गरे । गिरफ्तार १६ जना एक महिना सम्म दिशाबाट रगत पर्नेगरि यातना दिएको उनले आरोप लगाए ।
डिएसपी उद्दव सिङ भाटले स्वयम् आफै यातना दिएको सुनारले बताए, भाट अहिले सरुवा भएर टेकुमा रहेका छन् ।
खालि कागजमा जबर्जस्ति सहिछाप गराएर कृते कागज गराई मुद्दा दर्ता गराएको आरोप लगाए । बिग्रेको एउटा कट्टा र थ्री नट थ्री राइफलका ३ वटा गोली लगायत विस्फोटक पदार्थको कृते कागज गराई डिएसपी भाटले पिडितहरु माथि मुद्दा चलाएको भन्दै वलीले आक्रोस पोखेका थिए ।
डिएसपीले गिरफ्तार १६ जनाको झोलाहरु जबर्जस्ति खोसेर गायब गरेको ३ घण्टापछि सामानहरु बरामद गरेको बन्दिहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा चुडामणि ओली लगायतका बक्ताहरुले यातना दिएको भनिएका डिएसपीलाई छानबिन गरि क्षेतिपूर्ति सहित आबस्यक कारबाही गराउन मानब अधिकारबादीहरु समक्ष हारगुहार गरेका छन् ! साथै छानबिन आयोग गठनगरि सरकारले आबस्यक कारबाही गर्न मागगरेका छन् । डिएसपी जस्तो व्यक्तिले गुण्डागर्दी शैलीमा नेपाल सरकारको कानुन भन्दामाथि रहेर बन्दीमाथि हर्कत गर्न नहुने आक्रोस पोख्दै ओलीले प्रतिकार गरेको सुनारले बताए ।
गणतन्त्र ल्याएको कुर्सीमा बसेर गरेको पदको दुरुपयोग गर्दै गुण्डागर्दी शैलीमा गलत गर्ने र कृते कागज गराई नेपाल सरकारको कानुनलाई समेत धज्जी उडाउने डिएसपी उद्दव सिङ भाटलाई हदैसम्म कारबाही नभए, न्यायका लागि जनता समक्ष जाने बक्ताहरुले प्रतिबदता जाहेर गरेका थिए ।